News | man
News | Tag: man
यसो गर्दा मानिसहरुका शत्रुहरु बढ्ने गर्छन्
युवतीले जहिले ख्याल गर्ने कुराः कुनु कुन राशिका पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा उत्कृष्ट पति ?
के ह्याण्डसम हुनु अपराध हो ? यस्तो होइन भने दुवईमा बस्दै आइरहेका एक युवकले सजाय किन पाए ? के तपाईलाई थाहा छ ह्याण्डसम भएकै कारण यी युवकले देश छाड्नु पर्यो छ ?
किन पुरुषको तुलनामा महिलाको दिमाग तेजिलो हुन्छ ?
एजेन्सी । कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नदेखि भावानात्मक नियन्त्रण (इमोसनल कन्टेल) गरेर जीवनका तनावहरु हटाउनका लागि नै किन नै नहोस् महिलाको दिमाग पुरुषको तुलनामा धेरै नै राम्रो र उत्कृष्ट काम गरिरहेको हुन्छ ।
यस्ता कुराहरुमा पुरुष अति नै धेरै डराउने गर्छन्
एजेन्सी । समाजका अधिकांश कुरामा आज पनि पुरुषहरुको अग्रसरता रहेको छ । तर, उनीहरु पनि विभिन्न भयमा बाचिरहेका हुन्छन् ।
अभागी पुरुषका संकेतहरु
महिला र पुरुषमा को बढी अल्छी ?
एउटा अजबगजबको अध्यननको निष्कर्ष बाहिर आएको छ । महिला र पुरुषलाई लिएर को बढी सरसफाइलाई ध्यान दिन्छ भनेर अनुसन्धान गरिएको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार महिला भन्दा पुरुष आफ्ना भित्री वस्त्रलाई लिएर बढी फोहोरी हुन्छन् ।
युवतीका यस्ता कुरामा मोहित हुन्छन् पुरुष
एजेन्सी । युवतीका विभिन्न कुराले पुरुषलाई आकर्षित गर्छन् । तर, युवतीको सबैभन्दा ठुलो कुरा उनीहरुको आत्मविश्वास हो । पुरुषलाई महिलामा कति आत्मविश्वास छ र कति सम्हाल्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा खुव विचार गर्छन्।
अजबगजबको ‘मोर्डन म्यान केभ’
एजेन्सी–केही वर्ष अगाडिको कुरा हो, एक ३८ वर्षिय व्यापारी एन्जेलो मास्ट्रोपिइट्रो रोगबाट ग्रस्त भए । विरामी परेपछि उनले जीवनलाई नयाँ तरिकाले चिन्ने अवसर पाए । त्यसपछि उनले एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिए ।